Part 1: The ikpeazụ version nke Windows Media Player na 2015
Part 2: ga-windows 10 ewepụ windows media ọkpụkpọ na 2015?
Nkebi nke 3: Atụmatụ maka iji Windows Media center
Windows Media Player bụ otu n'ime ndị na omume na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye otu arụmọrụ nakwa dị ka n'ozuzu media akpọ na ahụmahụ a na ịke na klas. Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ijide n'aka na ihe omume ahụ tinye n'ọrụ na ndị kasị mma n'ụzọ na Ya mere n'ozuzu arụmọrụ ga-eji na a n'ụzọ ka e chepụta site na ụlọ ọrụ. Isiokwu a bụ n'ezie jupụtara ọmụma banyere ọdịnihu nke Windows Media Player mere na ndị kasị mma e nwere ike iwere nke onu.
The mgbasa ozi ọkpụkpọ 12 ulo oru-atụle ga-ikpeazụ version nke usoro ihe omume ya mere ọ dị ugbu a biakwa obibia na Microsoft gaghị na-emepe emepe ihe ọ bụla ọzọ media egwuregwu na mmekọrita ọhụrụ mbipụta nke windows na a ga-ulo oru na July 2015. Ọ bụ kwa-ahụ kwuru na nkwado nwekwara e kwụsịrị na Ya mere onye ọrụ kwesịrị iji jide n'aka na ihe ọkpụkpọ a na ma uninstalled iji wuru na terminologies ma ọ bụ ma ọ bụrụ na onye ọrụ ka chọrọ ịnọgide ya mgbe ahụ nkà ga-mastered iji jide n'aka na ọ dịghị mbipụta erukwa na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na n'ozuzu teminoloji nke mgbasa ozi ọkpụkpọ bụkwa na-discontinues na dị ka kwa ụlọ ọrụ na DVD version ga-oru na-eme n'ọdịnihu iji jide n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a .
Ọ na-na--ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọ bụrụ na usoro a na kwalite ka windows 10 mgbe ahụ n'ozuzu teminoloji nke media center tinyere mgbasa ozi ọkpụkpọ ga-bụghị naanị-nkwarụ ma usoro ihe omume dịghị mgbe a ga arụnyere ọzọ. Ọ bụkwa otu n'ime drawbacks nke ọhụrụ OS ulo oru site Microsoft dị ka kwa ihe nke na ụfọdụ ndị ọrụ ma n'ozuzu teminoloji ga-na-esonụ larịị dị ka kwuru site Microsoft na mmepe ogbako ẹkenịmde ke Sam Francisco. N'ihi ya dị ebube oge nke Windows Media ọkpụkpọ emesịala-abịa na njedebe nke ọ bụghị nanị na mere n'aka na n'ozuzu nke maka onye ọrụ na-kpebiri ma emewokwa n'aka na n'ozuzu Ndinam nke mgbasa ozi ọkpụkpọ ma ọ bụ nsụgharị na a ga-ulo oru na -abịa afọ a na-nụchara anụcha ka ukwuu nke mere na onye ọrụ bụ ike ịnụ ụtọ zuru atụmatụ arụmọrụ nke Windows Media Player na àgwà na klas.
Media Center na ozugbo sonye adịgide ọnụ ọgụgụ nke ndị ọrụ nile gburugburu ụwa bụ akpatre nwụrụ anwụ dị ka ọ na-e nkwenye site Microsoft na mmepe ogbako ẹkenịmde ke January 2015. The Windows 10 bụ ihe kasị mma OS na e agbam onya site na Microsoft ruo ugbu a ma ọ bụ na a ga-kwuru na maka mgbasa ozi ọkpụkpọ ihe center hụrụ na ọ bụ ihe na e weere dị ka ndị kasị njọ nke mgbe niile, ya mere ọ na-adịghị ekwe ka onye ọrụ iji nweta ndị kasị mma na ọkaibe results na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ na nke a kwesịrị ime ka n'aka na windows 10 functionalities ga-maa-agụnye a ọkpụkpọ dị ka OS-atụle ga-ezughị ezu-enweghị ihe a ma otu ihe n'ihi na n'aka na nke a ga-abụ a Windows Media Player ya mere ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị kasị mma na ala nke nkà ọrụ nke mgbasa ozi ọkpụkpọ nwere ike na-na-enwe ma ọ bụrụ na onye ọrụ na-akawanye ndị okenye na nsụgharị nke windows ntụgharị windows 7 na 8 niile mbipụta. E nweghị ụzọ ọzọ na-eme ka n'aka na mgbasa ozi ọkpụkpọ na-enwe dị ka a kwụsịrị na onye ọrụ nwere ike ọ bụghị ka ojiji nke onu mgbe ọ na-abịa windows 10 dị ka n'ozuzu teminoloji na-adịghị e mere dakọtara na windows 10 OS na bụ ọhụrụ mgbakwunye na Microsoft ezinụlọ nke os. Onye ọrụ na nke a ekele kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe atụmatụ nwekwara na-enwe mgbe ọ na-abịa windows 10 ma ọ nwere na-mere n'aka na ọrụ nke windows 10 maa nwere ichefu windows media ọkpụkpọ 10 n'ihi na n'aka.
N'ihi na ndị niile na ndị ọrụ chọrọ na-enwe zuru atụmatụ arụmọrụ enweghị upgrading usoro mkpa ijide n'aka na n'ozuzu teminoloji nke Media Center na-abụghị nanị tinye n'ọrụ dị ka kwa nkebi a ma ha nwekwara mkpa ijide n'aka na functionalities na-emejuputa atumatu.
1. Onye ọrụ nwere ike iji beginners nduzi na-uploaded ka internet iji jide n'aka na atụmatụ nke ndụ TV na gụgharia na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọrụ kwesịkwara ime ka n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe TV ntuziaka ntọlite ​​nwekwara e nyere site Microsoft mere na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị nduzi bụ tinye n'ọrụ iji nweta ihe kasị mma nke Media center arụmọrụ nke dị n'okpuru ajụjụ.
2. The Hulu desktọọpụ nwekwara ike ike na Windows Media Player na nke a bụ otu n'ime ndị atụmatụ nke ọtụtụ ndị ọrụ na-amaghị nke. Nke a ndu Otú ọ dị na-adịghị nyere site Microsoft ma ike-achọ na hụrụ mfe online.
3. The ndụ TV ndekọ arụmọrụ nwekwara ike na-enwe iji jide n'aka na kasị mma na ndị ọkaibe ndị na-abụghị naanị ụtọ ma onye ọrụ ọkọkpọhi ihe kasị mma nke onu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndị ahụ e dere TV nwekwara ike dezie ma ọ bụ a arụmọrụ nke e ike na ọtụtụ n'ime ndị Player na na-nyere site dị iche iche na ụlọ ọrụ.
> Resource> WMP> 3 ihe banyere Windows Media Player na 2015